I-Android Q: Kuqinisekisiwe ukuba zeziphi iifowuni zeHuawei eziza kuphucula ziye | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Huawei, Iinguqulelo ze-Android
Iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo I-beta yesithathu ye-Android Q yaziswa ngokusemthethweni, apho sifumana amanqaku amaninzi. Ukongeza, yayisele iqinisekisiwe ukuba zeziphi iifowuni eziza kuba zezokuqala ukuba nale beta, eya kuthi okokuqala idlule kwizixhobo ezingama-20. Kancinci ukufika kwale nguqulo yenkqubo yokusebenza kubonwa njengento esondeleyo. Ke ngoko, iimveliso ziyaqala ukuqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni abaza kuzihlaziya.
Isamsung yayiyeyokuqala xa babhengeza iifowuni zokuqala kuluhlu lwabo ukuba unokufikelela kwi-Android Q. Nangona uphawu lwaseKorea ibingelilo lodwa. Ngoku U-Huawei uqinisekisile ukuba zeziphi iifowuni zakhe Bangabokuqala ukuqinisekiswa ukuba banokufikelela kuyo.
Ayisiyiyo into yokuba kukho izinto ezininzi ezimangazayo kuluhlu. Njengoko ukubheja uphawu lwesiTshayina kwiifowuni zalo ezinamandla, isiphelo sayo sangoku, njengalezo ziya kuba nakho ukufikelela kolu hlaziyo kwi-Android Q. Kuya kubakho iifowuni ezininzi ezinokufikelela kuhlaziyo, kodwa okwangoku asazi ukuba ziya kuba yintoni.
Iimodeli zokuqala ezikhethiweyo zezi: Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Porsche Edition, Huawei Mate 20, Honor View 20 and Honor Magic 2. Kule meko, sele beqinisekisiwe kwimeko yase China, nangona eyona nto isengqiqweni kukuba oku kubala wonke umntu.
Ngelixa kungekho zimanga kululuhlu, uHuawei khange athethe enye into. Asinayo imihla ekusungulweni kwe-Android Q kwezi fowuni zohlobo lwamaTshayina. Okwangoku kusafuneka silinde ii-skwaye ukhulule isibini sebas yenkqubo yokusebenza. Ngelixa ingxelo ezinzileyo inokufika ngo-Agasti.
Kungenxa yoko, I-Android Q ayibonakali ngathi inokubetha ezi fowuni zophawu ngaphambi kokuwa. Ngokuqinisekileyo phambi kokuphela konyaka kuya kubakho abathile abaya kuba nakho ukufikelela kolu hlaziyo. Eyona nto inokwenzeka, njengoko le mihla isondela, inkampani iya kusixelela ngakumbi ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei ibhengeza iifowuni zokuqala zokuphucula ukuya kwi-Android Q
I-Fortnite ifikelela kwixesha le-XNUMX ngezixhobo ezitsha, indawo kunye nokunye